Tabeo e2, mbadamba ihe egwuregwu ọhụrụ-R-anyị maka ụmụaka | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
E-akwụkwọ ọnụ ala
Amazon unu si n'ihe unu
Kacha mma eReader
Tabeo e2, ihe ọhụrụ Tomụaka-R-anyị
Joaquin Garcia | | Hardware, mbadamba
Ọnwa ole na ole gara aga Ihe egwuregwu ụmụaka R O tinyere mbadamba nkume na eReader n'ime mbadamba nkume na eReader, m na-ekwukwa ihere n'ihi na atụmatụ ya dị mma ma nzube ya bụ iji chọpụta ahịa ọhụrụ a. O yiri ka nsonaazụ ahụ dị mma ma ugbu a, ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ọ na-aga ahịa Taịbi e2, na ọhụrụ mbadamba maka ụmụaka na ụmụaka. Taịbi e2 ewebata ọhụrụ atụmatụ lekwasịrị anya kasị nta na na m na-atụle a na-amụ nke ọma otú ahụ ka m na-eche Taịbi e2 ga-enye ọtụtụ ihe ikwu.
Tabeo e2 atụmatụ
Taịbi e2 na-agbanwe nha ihuenyo ya ma jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ, gafere dị ka nke a site na 7 ″ ruo 8 ″, si otú ahụ na-emegharị ihuenyo maka ọha na eze. Ihuenyo, na mgbakwunye na ịbụ nke na-emetụ n'ahụ na nke nwere ikike, nwere mkpebi nke 1024 x 768. Ma obi nke igwe, ọ na-agba ọsọ a processor dual-isi na 1 ghz na 1 Gb nke RamBanyere nchekwa, ọ nwere 8 Gb nke ohere, gbasaa site na oghere microsd (dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile ugbua). Taịbi e2 O gosiputara g-sensor, ọkà okwu / igwe okwu, HDMI na mmepụta WiFi / BT, yana yana ọmarịcha ihe eji achọ ịrịọ obere ndị na-ege ntị. N'ikpeazụ, rue ihe gbasara ngwaike, Taịbi e2 O nwere kamera weebụ abuo, otu 2MP na VGA nke ọzọ nke naanị ya ga - eme ka obere oge gbaa ọsọ, ana m ekwu nke a site na ahụmịhe nke onwe. Ma ngwaike abụghị naanị ihe Tabeo e2 ọhụrụ nwere, mana ọ nwere ọtụtụ katalọgụ sọftụwia emere maka ọha na eze. Katalọgụ a ga-agba ọsọ na Android 4.2, nke kachasị ọhụrụ nke sistemụ Google. The katalọgụ e adi na anyị nwere ike ịhụ free fun ngwa dị ka Mkpụrụ Ninja ma ọ bụ agụmakwụkwọ dị ka Crayon. Naanị ihu ala ọ na-eweta Taịbi e2 N'oge a, ọ bụ ndụ batrị, naanị awa 5, nke maka ụmụaka adịghị ka ihe kwesịrị ekwesị, mana ọ naghị anọchite nnukwu nsogbu.
N'oge anyị maara nke ahụ Taịbi e2 ga-adị na shelf nke Ihe egwuregwu ụmụaka R Malite na Ọktọba na ọnụahịa nke dollar 150, ihe anyị na-ejighị n'aka bụ na na Spain mgbanwe ahụ kwekọrọ ma bụrụ euro 112, ebe ọ bụ ọnụ ahịa dị elu, na-atụle mbak ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ana m ahụ, n'echiche nke m, ọdịnihu dị mma maka mbadamba a, ebe ọ bụ na e kere ya na nzube doro anya, na-eme ka ngwanrọ na ngwaike dị n'otu, nke ọ bụghị mbadamba nkume niile echere maka ụmụaka na-echebara nke a echiche, dị ka o doro anya na ọ nwere ike iyi.
Ozi ndị ọzọ - XO Mbadamba ụrọ mbadamba nwere nzube bara uru ma ọ bụ bara uru?
Isi mmalite na onyonyo - Dijitalụ Ọgụgụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » mbadamba » Tabeo e2, ihe ọhụrụ Tomụaka-R-anyị
Ndị kasị mma eReaders
Jiri ohere ahụ wee nweta ụfọdụ ndị kacha mma eReaders n'ahịa na ọnụ ahịa mara ezigbo mma
Kindle tinyekwaGbasara akwukwo PaperwhiteỌdịdị Omenala
Kedu ihe kpatara Sony “ji nyefee” ikpe ahụ na Sony Reader PRS-T3?
Ebumnuche ga - ekwe omume "mbanye" eBook echekwara na Kindle na LEGO
Nnwale nnwale nke Amazon efu: akwụkwọ ndekọ ọdịyo 90.000+